Soo dejisan Hangouts 14.0.136618992 – Vessoft
Network Bulshada, Isgaarsiinta Voice, Webcams
Soo dejisan Hangouts
Tagi – software caan ah si ay isu dhaafsadaan fariimaha qoraalka, iyo codka ama video yeedhayso. Software waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo muuqaalada, sida search u fududahay users, isgaarsiinta ee CHAT koox, sarrifka ee files, daabacaadda diiwaanada kala duwan iwm tagi kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan oo ay ku hadlaan shirarka video la users badan. Software ayaa sidoo kale macaamila codsiyada ugu badan ka adeega Google oo si toos ah synchronizes taariikhda warqadihiisa on qalab kala duwan. Tagi ka mid ah qalabka kala duwan reserved software in ay baahida user.
Voice iyo video yeedhayso
Video shir la users badan
.Wadashaqayntaas Of sheekaysiga qalabka kala duwan
Dhexgalka ee software kala duwan ka soo Google
Hangouts Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Skype 7.22.0.322
العربية, English, Français, Español... Tango 3.26.211814
العربية, English, Français, Español... VK 4.5.2
العربية, English, Français, Español... Mamba 3.14